Nkwado anyị - Akụrụngwa egwuregwu Haiber (Shanghai) Co., Ltd.
Etinye ego ma laghachi
Ihe ịga nke ọma ndị ahịa dị anyị mkpa, yabụ anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla nyocha nkeonwe nke ROI iji chọpụta uru ahịa ha bara. Ọbụlagodi na ị bụ ọhụụ na ahịa, ị gaghị etinye ego na ntinye onwe gị. Kama, anyị na-enyere gị aka ịme mkpebi ndị dabere na eziokwu na ọnụ ọgụgụ.
Ọ bụrụ n’inwe echiche ị ga-ezere ogige nke ndị asọmpi gị, anyị ga - enyere gị aka ịzụlite ya ka ọ bụrụ ezigbo agbanwe agbanwe, nke ewepụtara n’ụdị mmeghe dị ka ọsọ. Ọ bụrụ na ịnweghị nkọwa zuru ezu, echegbula, ị nwere ike isoro ndị na-ahụ maka gị kwurita ihe ndị ị tụrụ anya na ebumnuche gị, anyị ga-anọkọ ọnụ.
Mgbe usoro nhazi ahụ amalitela, anyị na onye ahịa anyị ga-enwe nkwukọrịta sara mbara ma onye nrụpụta ahụ ga-ahụ na ọ ghọtara ihe ndị ị chọrọ nke ọma na usoro ọrụ. Ulo oru gi? Ebumnuche azụmaahịa ahụ ga-abụ ihe ntụzi maka onye nrụpụta ka o wee nwee ike ịmalite usoro omenala nke na-egbokwa mkpa gị. Ndị na-enye ndụmọdụ ga-anọnyere gị site na ngwaọrụ nkwukọrịta dị iche iche nke Internetntanetị ka ị wee nwee ike ịnọgide na-enwe ọganihu gị. Mgbe emechara, ị ga-atụle nyocha nke gị. Anyị ga-anwa ike anyị ruo mgbe ị juputara afọ.
A na-ewere iwu gị ọ bụla ka ihe dị iche. Site na nkwenye iji, anyị ga-etinye data n'usoro njikwa ọrụ anyị, iji hazie mmepụta dịka dabere na ụbọchị nnabata kwenyero dị mma. Onye njikwa ọrụ gị họpụtara ga-akọrọ gị oge niile ka i wee jikere nke ọma mgbe ọrụ ahụ ga-amalite.
AKW -KWỌ AKW -KWỌ AKW SHKWỌ
Iwu iwu na usoro omenala si n'otu mba gaa na mba ọzọ, mana ahụmịhe anyị nwere na mbupụ ebe a na-egwu egwuregwu na akụrụngwa gaa mba 20 na-enye anyị ohere ijikwa nsogbu mbupu na idobe omenala. Ọtụtụ akụkụ nke azụmaahịa egwuregwu n'ime ụlọ gị chọrọ nlebara anya gị, mana nwee obi ike na mbupu ngwaahịa abụghị otu n'ime ha.
Installationwụnye nke ọma bụ akụkụ dị mkpa n'ime ụlọ dịka ogo. Ejiri nrụnye adịghị mma, nrụgide Haiber na-arụ ọrụ nke nwere ọzụzụ nrụnye nke ọma na ebe nrụnye bara ụba karịa ebe egwuregwu 500 dị na gburugburu ụwa. Can nwere ike ijide n’aka na ịnwere ike ịtụnye nrụnye saịtị gị nye anyị.
Anyị nwere ike ịnye ndị ọrụ gị ọzụzụ na saịtị ahụ n'efu, gụnyere nrụnye, ndozi na njikwa nke ogige ahụ. Ha na-aza ajụjụ ndị nwere ike ibilite ma ha na-arụ ọrụ.
-Re ahịa mgbe azụchara
Anyị na-agba mbọ ịnye ọrụ azụmaahịa dị mma ka ị wee nwee ike ịnụ ụtọ aha dị mma na oge mmezi dị mkpụmkpụ. Ndị ahịa anyị niile nwere ohere maka ndozi ahaziri ahaziri na akwụkwọ nrụnye na mmezi zuru oke nke gụnyere mgbakwunye ka ogige ahụ nwee ike rụọ ọrụ nke ọma. Ihe ọzọ bụ, onye njikwa akaụntụ ọkachamara anyị yana otu ndị ọrụ nkwado ga-enyere gị aka n'oge enyere gị aka ụbọchị asaa n'izu.